ရေကူးကန်ရှိအိမ်ခြံမြေများ - ATLAS Tenerife® Property Agency
ရေကူးကန်သည် Tenerife ရှိမည်သည့်အိမ်ခြံမြေမဆိုအသုံး ၀ င်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Tenerife၊ Playa de la Arena တွင်ရောင်းချရန်အထူးသီးသန့်ပထမတန်း Ocean Ocean တိုက်ခန်း အပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းပေါ်မှာနေရတာပါ။ ကျန်ကြွင်းသောအရပ်သည် ...
ရေကူးကန်နှင့်အတူ Oceanfront တိုက်ခန်း
Tenerife ရှိ Playa de la Arena တွင်မကြာသေးမီကပြင်ဆင်ထားသောတိုက်ခန်းများရောင်းရန်ရှိသည်။ tiled ခေါင်မိုးများအပေါ်သမုဒ္ဒရာ၏ရှုမြင်ပုံသည်မြေထဲပင်လယ်ကိုခံစားစေသည်။ ပရိဘောဂအစုံအလင်ပါ ၀ င်သည်။ ရေကူး ...
Playa De La Arena အနီးရှိ Finca-villa
Playa de la Arena၊ Guia de Isora
Tenerife၊ Playa de la Arena အနီးရှိ Cueva de Polvo တွင် finca ကြီးရောင်းရန်။ ပြီးပြည့်စုံသောတည်နေရာ။ ၁.၅ ဟက်တာထက်ပိုသောတိုက်ခန်းသည် ...
Tenerife, Los Gigantes ရှိရောင်းချရန်သီးသန့်သီးသန့်တိုက်ခန်းတစ်ခန်း။ သမုဒ္ဒရာအပေါ်သို့လှပသောမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများ၊ Los Gigantes ကမ်းပါးများနှင့် Teide တောင်တန်းများ! အလွန်ပုဂ္ဂလိကနှင့် ...
Los Gigantes အနီးလှပသော Villa-finca!
Los Gignates နှင့် Tenerife, Playa de la Arena တို့မှ ၅ မိနစ်အကွာတွင် La Caldera ရှိ Finca ကိုရောင်းမည်။ ရေကူးကန်နှင့်ခေတ်မီအိမ်
Los Gigantes မှ Tamaimo သို့သွားသော La Caldera တွင်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများပါသောကြီးမားသောသီးခြားအိမ်တစ်လုံးရောင်းရန်ရှိသည်။ လမ်းမရှိသောတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောနေရာ ...
မြေ၊ ကိုယ်ပိုင်ရေကူးကန်နှင့်ရှုခင်းများပါသော Finca-villa !!
ရောင်းရန်: Fasnia, Tenerife ရှိပုဂ္ဂလိကရေကန်နှင့်အတူအိမ်ခြံမြေကြီးများ! နှစ်ထပ်အိမ်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်ရေကူးကန်နှင့်အတူကျယ်ဝန်း Finca! မြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများ! ရုံ ...
Adeje၊ Tenerife ရှိရောင်းမည့်လုံးချင်းအိမ် မြို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်လမ်းလျှောက်အကွာအဝေးနှင့်အလယ်ဗဟိုဖြစ်သည်။ ကမ်းခြေများသို့ကားဖြင့်ငါးမိနစ် ...
Los Cristianos တွင်ပင်လယ်ရှုခင်းများပါသည့်ကျယ်ဝန်းသည့် Penthouse
ရောင်းရန်: Los Cristianos, Tenerife အလယ်ဗဟိုရှိနှစ်ထပ်အငှားအိမ် လှပသောသမုဒ္ဒရာနှင့်တောင်တန်းရှုခင်းများ။ လမ်းလျှောက်ရန်အကွာအဝေးအတွင်းရိယာ ...
Playa De La Arena ရှိပထမ ဦး ဆုံး Ocean Ocean Row တိုက်ခန်း
Tenerife၊ Playa de la Arena ရှိတိုက်ခန်းကြီးရောင်းရန်! ပထမသမုဒ္ဒရာအတန်း တိုက်ခန်းတွင်အဝင်နှစ်ခုရှိသည် - နောက်ကွယ်မှအဓိကလမ်းမှ ...
Los Gigantes ရှိသမုဒ္ဒရာရှုခင်းများနှင့်အတူဇိမ်ခံတိုက်ခန်း!
Tenerife, Los Gignates ရှိရောင်းရန်ကျယ်သောတိုက်ခန်း 55 စတုရန်းမိုင်။ မီတာ။ သမုဒ္ဒရာကိုလှန်လှောရှုမြင်ကွင်းများနှင့် Los Gigantes ကမ်းပါးများနှင့်အတူကျန်ကြွင်းသောအရပ်။ အပူ ...
Playa Paraiso ရှိပင်လယ်ရှုခင်းများနှင့်အတူခေတ်မီတိုက်ခန်း!
Tenerife, Playa Paraiso ရှိသမုဒ္ဒရာရှုခင်းများနှင့်အတူခေတ်မီတိုက်ခန်းရောင်းမည်! သမုဒ္ဒရာမှ ၃၅၀ အတွင်းတည်ရှိသောတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောနေရာတွင်တည်နေရာကောင်း
Los Halcones အဆောက်အအုံ၊ Chayofa၊ Tenerife ရှိလှပသောလုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်! သဲသောင်ပြင်များနှင့် ၄ မိနစ်သာကွာဝေးသောဆိတ်ငြိမ်သောရပ်ကွက်တွင်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
Parque de la Reina တောင်ဘက် Tenerife ရှိကျယ်ဝန်းသောတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ အိပ်ခန်းသုံးခန်း၊ ရေချိုးခန်းနှစ်ခန်း၊ living ည့်ခန်း၊ မီးဖိုခန်းနှင့်ရေချိုးခန်းခန်း။ မြင်ကွင်းကျယ်ဖြင့် ...
Los Gigantes ရှိဇိမ်ခံ Penthouse
Tenerife, Los Gigantes ရှိရောင်းရန်ဇိမ်ခံ ၁၃ ထပ်တိုက်ခန်းတိုက်ခန်း ချောက်ကမ်းပါးများ၊ ပင်လယ်နှင့်အိမ်နီးချင်းကျွန်းများကိုမြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းများ။ အကောင်းဆုံး ...
Playa De La Arena၊ Punta Negra ရှိ Ocean ကျယ်ဝန်းသည့်အိမ်
သမုဒ္ဒရာမှ ၁၀ မီတာအကွာတွင်ကျယ်ဝန်းသည့်သီးသန့်အိမ်တစ်အိမ်။ Tenerife မှာအကောင်းဆုံးရပ်ကွက်တစ်ခု။ ရပ်ရွာရေကန်။ ပုဂ္ဂလိကကားဂိုဒေါင်။ နေလ ...